Chii chakakosha mambure aWebbie? Rapper akamhanyira kunze kwekuvaka mushure mekunge atambura nekubatwa pachikuva - Pop-Tsika
Chii chakakosha mambure aWebbie? Rapper akamhanyira kunze kwekuvaka mushure mekunge atambura nekubatwa pachikuva
Webster Gradney Jr., aka Webbie, akafanirwa kuburitswa mukirabhu vhiki rino mushure mekugumburwa kubva pachikuva. Chiitiko chakatorwa pavhidhiyo.
Iyo inozivikanwa rapper anga achitamba ku213 Lux Lounge muRoanoke, VA, muna Nyamavhuvhu 20. Zvisinei, pane imwe nguva panguva yekonzati yake, anga achirwara uye akazoburitswa muchivako nechikwata chake. Akataridzika zvakanaka pamberi pezvese izvi uye aiita kuboka guru revanhu risina kana dambudziko.
Webbie akatambura kubatwa panguva yekuita nezuro husiku. Minyengetero kumusoro pic.twitter.com/uRSJfaYmxk
- DatPiff (@DatPiff) Nyamavhuvhu 22, 2021
Muvhidhiyo clip, Webbie anoonekwa achinetseka kuti agare netsoka dzake sezvaanotanga kubva pachikuva uye achitsvaga rubatsiro. Asi asati agonesa musuwo, akabva adonha pasi. Vanhu vakamukomba, vakatanga kudana rubatsiro. Asi zvisati zvaitika, vakamutakura vakamuburitsa muchivako.
Hazvizivikanwe chii chakaitika kune rapper. Vanhu vashoma vakafungidzira kuti ingave iri mhando yekutora. Zvinoenderana nekuvandudzwa kwazvino, mumiriri weWebbie akati ari kuita zvirinani. Akaongororwa nachiremba mushure mechiitiko ichi uye aive akanaka kubuda muchipatara.
Iyo mambure akakosha eWebbie
Webbie ine rappers Boosie naPaul Wall (Mufananidzo neGetty Mifananidzo)
Akazvarwa munaGunyana 6, 1985, Webbie anozivikanwa rapper kubva kuBaton Rouge, Louisiana. Kubva 2003, akasainwa kune yakazvimirira Trill Varaidzo uye akauya pachiitiko chehip-hop muna 2005 naGimme Icho chine Bun B.
Zvinoenderana nehupfumiypersons.com, vane makore makumi matatu nematatu mambure akakosha iri kutenderera $ 4 mamirioni. Akawana mari yakawanda mushure mekubudirira kweumwe wake Kuzvimirira mugore ra2008. Gore ra2011 rakaratidza kuve rombo rakanaka kumurapi sezvo iye akawana mari yakawanda mushure mekunge dambarefu rake Savage Life 3 rave rakakurumbira.
Webbie akawana hupfumi hwakawanda kubva mukuburitswa kwake kwakanyanya singles uye maalbum. Parizvino ari kurarama hupenyu hwepamusoro.
Amai vemurapi vakashaika aine makore mapfumbamwe, uye kuchengetwa kwevabereki vake kwakakamurwa pakati pababa vake naambuya. Akanyora madimikira aine makore mashanu uye akazove fan hombe yeva hardcore rap maartist sa Master P, Eightball & MJG, iyo Geto Boys, UGK, nezvimwe.
Verenga zvakare: Mutongi waDhiyabhorosi achipedzisa akatsanangura: Eriah akaenda kupi mushure mekunge Yo-han akonzera kuputika kwebhomba kwakauraya munhu wese?
Batsira Sportskeeda kuvandudza kufukidzwa kwayo kwepop-tsika nhau. Tora ongororo yemaminetsi matatu ikozvino.
kudzivisa kudonha murudo
nhetembo kune avo vakapasa
kubatsira sei shamwari kukurira kurambana
2017 wwe kubhadhara per maonero purogiramu
anoda kuitora zvishoma
zvinhu zvekuita pazuva rako rekuzvarwa nemukomana wako
kutamba sei nesimba kuti uwane asi uchengete iye achifarira